Hindiya waxay biloowday soosaarka cagaaran ee Hydrogen - Alietc.com
Samiira Hassanzadeh March 12, 2021 0 comments
Hindisaha hydrogen cagaaran ee Hindiya waxaa isku raacay Fusion Fuel Green iyo BGR Energy Systems. Waxay ka dhisi doonaan tas-hiilaadka la xiriira Tamil Nadu, oo ah koonfurta gobolka Hindiya, sanadkan.
Ujeeddadu waa in la ballaariyo qorshaha hydrogen cagaaran ee dalka.
Fusion Fuel Green, oo xafiisyo ku leh Boortaqiiska iyo Irland, waxay siin doontaa warshadda Tamil Nadu teknolojiyad ay ku soo saarto hydrogen tamarta qorraxda.
Warshadu waxay ku dabaqi doontaa hydrogen-ka la soo saaray geedi socodka warshadaha culus.
Hydrogen-ka buluugga ah, in kasta oo uu yahay nooca cagaaran, wuxuu ka yimaadaa shidaalka qatarta ah. Qaali-qaali ah oo la soo saaro, hydrogen-ka cagaaran wuxuu keenay 0.1% oo keliya hydrogen-ka laga soo saaray adduunka sanadkii la soo dhaafay, sida uu sheegay Wood Mackenzie.
Raiisel wasaaraha India, Narendra Modi, wuxuu kahadlay bilaabida "National Hydrogen Energy Mission" sanadkii hore. Hadafka laga soosaarayo haydarojiinta ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo wuxuu soconayaa sanadaha 2021 ilaa 2022.
# Haydarojiin cagaaran